यौन सम्पर्क गर्नाले डण्डिफोर कम हुन्छ भन्ने धारणा गलत हो । यो कसैलाई भ्रममा पारी यौनसम्पर्क गर्ने दाउ मात्रै हुन सक्दछ । डण्डिफोर कम गर्न त छालालाई सफा राखी खानपानमा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । जस्तै चिल्लो पदार्थ कम खाने , पानी धेरै पिउने आदि । मलमुत्र बाहेक छालाबाट पनि हामीले खाएकाहरु पसिना मार्फत निस्कने […]
यौन सम्पर्ककाे बेला महिलाहरु आँखा बन्द गर्नुका कारण
यौन सम्पर्ककाे बेला महिलाहरु आँखा बन्द गर्नुका कारण ! मानिसका विभिन्न खालका आवश्यकताहरु हुन्छ । जीवनयापन गर्नको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार देखि लिएर सबै खालका आवश्यकताहरु अति महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ । त्यतिमात्र नभई यौन सम्बन्ध हरेक दम्पत्तिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैका लागि गरिएका हजारौं अध्ययन र अनुसन्धान सार्वजनिक भएका छन् । यसैक्रममा एउटा […]
कस्तो अवस्थामा यौन सम्पर्क गर्ने र कस्तो अवस्थामा नगर्ने भन्ने आ–आफ्नै धारणा, तर्क सुनिन्छ । कतिपय अवस्थामा यौन सम्पर्क गर्नै हुन्न । महिलाले आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराईरहेको समयमा शिशुसँग रमाइरहेका हुन्छन् । शिशुको स्याहार सुसार गरिरहेको समयमा आमाले शिशुसँग माया ममता बाँड्छन् । यस्तो अवस्थामा आमाको एकाग्रता शिशुप्रति हुन्छ । स्तनपान गराएको समयमा आमाका लागि […]
के तपाईलाई थाहा छ, विवाह हुनुअघि पुरुषले महिलालाई प्रभावित गर्न केहि झुटहरु बोलेका हुन्छन् । विवाह अघि केटाहरुले बोल्ने झुटहरु यस्ता छन् : अहिलेसम्म मेरो कोहीसँग अफियर नै चलेको छैन विवाह अगाडि अधिकाशं पुरुषले बोल्ने सबैभन्दा ठुलो झुट नै यहि हो । केटाहरुका चाहे जति जना गर्लफ्रेण्ड हुन्, विवाह अघि त्यसलाई नर्काने गर्दछन् । तिमी […]
कतिपय पुरुषलाई थाहा नहुन सक्छ की यौनक्रियाका बेला महिलाको शरीरको कुन भागमा छुँदा बढी उत्तेजना आउँछ । सोही अन्जानका कारण उनीहरूको यौन जीवन निरास बनिरहेको पनि हुन सक्छ । यदि यस्ता कुरामा जानकारी हुने हो भने दम्पतीबीचको यौनक्रियाकलाप थप रोमाञ्चित बन्न सक्छ । ब्युटी बोनमा स्पर्श महिलाको घाँटी भन्दा मुनी र छातीभन्दा माथि रहेको हड्डीलाई […]
केटा मान्छेको यस्ता गल्तीले लाग्छ यौनजीवनमा ग्रहण
मानिसको यौन जीवनले उसको जीवनका अन्य पक्षहरुमा प्रभावित गरेको हुन्छ । नेपाली समाज, महिलाहरु त्यसैपनि खुल्न सक्दैनन । मन भएपनि चाहना भएपनि उनीहरु खुलेर यौनक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनन । मन उनीहरुलाई पनि हुन्छ तर कमै मात्र महिला वाइल्ड बन्न सक्छन । महिलाले व्यक्त गरेपनि या नगरेपनि उसले यौन आनन्दको मजा लिइरहेकी हुन्छे । समस्या के […]
महिलालाई यौन सम्पर्कको लागि तयार यी अंगहरु
अधिकांश पुरुष यौन सक्रियताका बेला माहिलाहरूलाई उत्तेजित गर्न तिनका एक वा दुई शारीरिक अंगमै बढी केन्द्रित हुन्छन् । तर महिलाका शरीरमा कैयन् त्यस्ता अंग छन् । जहाँ स्पर्श मात्र गर्दा पनि उनीहरूमा चाहना जागृत हुन्छ । महिलाको विभिन्न भाग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। उक्त भागको छाला धेरै पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छ। त्यसैले […]
यौनक्रिया मानिसका लागि घातक बन्न सक्छ ?
युरोपेली मुलुक स्पेनमा एउटा अनौठो घटना घटेको छ । एकजना युवतीलाई आफ्नो प्रेमीसँग शारीरिक सम्बन्ध सम्बन्ध राख्दाराख्दैको अवस्थामा अस्पताल दौडाउनु परेको छ। यस घटनाबाट कहिलेकाहीँ यौनक्रिया मानिसका लागि घातक पनि बन्दो भन्रे कुरा प्रमाणित गरेको छ । स्पेनकी ३१ वर्षीया एक युवतीले आफ्नो ब्वायफ्रेण्डसँग ओरल सेक्स गरिरहेको अवस्थामा घातक एलर्जी भएर गम्भीर रुपले निरन्तर वान्ता […]
यौनसम्पर्क गर्दा कसरी पाउने उच्चतम सन्तुष्टी ? यौनजीवनमा सन्तुष्ट नभएका मानिसहरुको दाम्पत्य सम्वन्ध नै असफल भएका कैयन उदाहरण छन् । विभिन्न कारणले यौन वा शारिरिक सम्पर्कका बेला समस्या निम्तने गर्छन् । यसले सन्तुष्टीमा असर पुर्‍याउँछ । गम्भीर सम्भोगका लागि पुरुष–महिला दुबैको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । स्वस्थ सम्भोगको लागि स्नायु प्रणाली पनि […]
जान्नुहोस्, पुरुषले यी अंग हेरोस भन्ने चाहन्छन महिलाहरु !
कृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन । विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको […]
जानिराखौं, स्तन स्पर्स गर्दा किन आनन्द आउँछ ?
डाक्टरको भनाइमा आधारीतः महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ । स्तनको निप्पल पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन भन्ने, यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हुनुपर्छ । तर स्तनको स्पर्शले महिलाहरुलाई किन यौन आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएका छन् । अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्ताहरुले गरको अध्ययनले महिलाहरुको स्तनको टुप्पो […]
एक्ट्रा म्यारिटल अफेयर अर्थात बिवाहेत्तर सम्बन्ध । दम्पतीबीच भाँजो हाल्ने यो प्रवृत्ति हामी कहाँ पनि व्यापक हुँदै गएको छ । बिवाहित पुरुष वा महिलाले शरीरिक वा मानसिक रुपमा परपुरुष वा परस्त्रि सँग सम्बन्ध बढाउनु हो । स्वभाविक हो, आफ्नो जीवनसाथीलाई धोका दिएर अर्कैसँग हिमचिम बढाएपछि दाम्पत्य जीवन धरापमा पर्छ । यो नहुनुपर्ने कुरा हो । […]
यी रोगहरुलाई यौन सम्पर्कबाट हुन्छ फाइदा
एजेन्सी, नियमित सेक्स गर्दा पाँच किसिमका राेगहरुमा फाइदा हुन्छः टाउको दुख्ने नेशनल सर्वे अफ सेक्सुअल एटीट्युड्स एण्ड लाइफस्टाइलले गरेको सोधले माइग्रेन भन्ने टाउको दुख्ने रोगका विरामीलाई नियमित सेक्स फाइदाजनक हुने देखाएको छ । सोधले महिनामा ५ पटक भन्दा कम सेक्स गर्नेहरुलाई माइग्रेन हुने नयाँ तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ । ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचापका विरामीलाई […]
मध्यम आकारको लिगं मै सन्तुष्ट हुन्छन् महिला
विशेष गरी महिलाहरु कत्रो लिंग मन पराउछन् ? भन्ने विषयलाई लिएर विश्वभर बहस बढेको छ । पछिल्लो समयमा यस्ता विषयमा विभिन्न अनुसन्धान र जनमत पनि सार्वजनिक गरिएका छन् । यस विषयमा अध्ययन गर्न पछिल्लो पटक वैज्ञानिकहरु थ्री डी प्रिन्टिङतर्फ समेत बढेका छन् । अनुसन्धानको परिणाम पुरुषका लागि खासै दुःखद छैन । किनकी आम पुरुषहरुको अनुमान […]